अस्ट्रेलियाका १० वर्षे बालकले विश्वलाई चकित पार्दै खोले आफ्नै वायुसेवा कम्पनी
Thu, Jun 20, 2019 at 10:48pm
प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएका 'विप्लव नेता' कुमार पौडेल को हुन् ? #आहा खबर# जापानमा ट्रम्प र पुृटिनबीच बहुप्रतिक्षित भेट हुँदै #आहा खबर# किन आउँछ बारम्बार अमिलो डकार ? यस्तो छ कारण #आहा खबर# विश्वकप क्रिकेट : डेभिड वार्नरको सानदार 'कमब्याक', विश्वकपमा कीर्तिमानी ब्याटिङ #आहा खबर# ४१ चेपाङ बालबालिकाको चितवनमा यसरी गरियो उद्धार #आहा खबर# सहकारी संस्था स्थापना गरी ठगी गर्ने जेल चलान #आहा खबर# अलपत्र परेको मेलम्चीको काम पुनःशुरु, ‘भेन्टिलेसन साफ्ट’को काम हुँदै #आहा खबर# न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति दर्जीको जीउने आधार : लठ्ठी र हथौडा #आहा खबर# १० महिनामा ५५ अर्बको शेयर सूचीकृत, पुनरकर्जाको उपयोग बढ्यो, नेप्सेमा ६ अङ्कको बृद्धि #आहा खबर# विभिन्न शीर्षकमाथि विनियोजन विधेयकमा खर्च कटौतीका ५ प्रस्ताव #आहा खबर# इरानले अमेरिकी ड्रोन खसालेको वासिङ्टनद्वारा पुष्‍टि #आहा खबर# सार्वजनिक बस दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु, २० घाइते #आहा खबर# संवेदनशील पारमाणविक भट्टी सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति नदिइने #आहा खबर# सर्लाहीमा विप्लवका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान, जिल्ला इञ्चार्ज मारिए #आहा खबर# पल्सर स्पोर्टस अवार्डमा सगरमाथा सिमेन्ट र टर्किस एयरलाइन्स जोडिए #आहा खबर#
सोमबार, २५ चैत्र २०७५,	आहाखबर
काठमाडौँ चैत २५।
सपना नदेख्नु देखेपछि ठूलै देखनुपर्छ भन्ने उदाहरणलाई यी बालकले पूरा गरेर छोडेका छन् । अस्ट्रेलियाका एक बालकले आफ्नै वायुसेवा कम्पनी सञ्चालन गरेर दुनियाँ नै चकित पारेका छन् । जो कोहीलाई यस्तो सपना देख्नु दिवास्वप्ना मात्रै हुन्छ । तर ती बालकले आफ्नो सपनालाई सार्थकता बनाएरै छोडेका छन् ।
सानै उमेरदेखि निकै जिज्ञासु स्वभावका १० वर्षिय एलेक्स जेक्वाट आफ्नै वायुसेवा सञ्चालन गर्न चाहन्थे तर कसरी सञ्चालन गर्ने र कसरी सफलता पाउने भन्ने बारे ज्ञान नहुँदा उनी निकै दुखि थिए । इच्छा भए उपाय कति कति भनेजस्तै उनको इच्छालाई पुरा गर्न केहीले रोक्न सकेन । त्यसपछि उनले अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा पुरानो बायुसेवा कम्पनी क्वान्टस एयरलाइन्सका सिइओ एलन जोयसलाई पत्रमार्फत वायुसेवा कसरी सञ्चालन गर्ने ? कम्पनी खोल्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर पत्र लेखे ।
१० वर्षे बालकको यति ठूलो जिज्ञासाको उत्तर सिइओले पत्र मार्फत नै दिए । कसरी वायुसेवा कम्पनी सुरु गर्ने कसरी सफलताको शिखर पुग्ने भन्ने बारे सबै कुरा पत्रमा नै उल्लेख गरेर पठाए । ती बालकको जिज्ञासा र सिइओको जवाफले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल भाइरल भएको छ । १० वर्षे बालकको पत्रको जवाफमा क्वान्टासका सिइओले लेखेका छन्, हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने जो कोहीले हामीसँग सल्लाह लिन चाहँदैनन् ।
कुनै एयरलाइन्स प्रमुखले जिज्ञासा राख्छ हामी त्यसको प्रतिक्रिया नदिइ बस्न सक्दैनौँ ।
एलेक्सलाई क्वान्टासका सिइओले पनि सिइओकै रुपमा भेटे । त्यसपछि उनीहरुले लामो दूरीको विमान र विमान भित्र खानपिनको विषयमा धेरै कुराको बारेमा छलफल गरे । यी दुइले एक अर्काबीच सहयोग गर्ने सझौता समेत गरेका छन् । त्यतिबेला सम्म एलेक्सले हाइस्कुलको पढाइ पनि सक्नेछन् ।
१० वर्षे बाललको उद्देश्य प्रति उत्साहित भएका क्वान्टासले बालकसँगको भेटलाई निकै गम्भिरताको साथ लिएका छन् । वायुसेवा कम्पनीको लागि यस्तै सोच राख्ने मान्छेको खाँचो रहेको बताउँदै एलेक्समा त्यो क्षमता भएको बताएका छन् । एलेक्ससँग गरिएको छलफल महत्वपूर्ण भएको बताउने क्वान्टासले उनीबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको बताएका छन् । क्वान्टासले एयरलाइन्सको क्षेत्रमा रुची राख्ने व्यक्तिको लागि आन्तरिक कार्यबारे नयाँ कार्यक्रम ल्याएर नयाँ कुराहरु सिकाउने घोषण समेत गरेका छन् ।
४१ चेपाङ बालबालिकाको चितवनमा यसरी गरियो उद्धार